Ɔsom Mu Gyidi Yɛ Sumii a Yɛde Yɛn Ti To So Anaa? | Q & A
Ɔsom Mu Gyidi Yɛ Sumii a Yɛde Yɛn Ti To So Anaa?
Sɛ yɛka sɛ obi de biribi ayɛ sumii de ne ti ato so a, ɛkyerɛ sɛ ɔde ne werɛ nyinaa ahyɛ dekode no mu ma ɛtɔ da bi mpo a, ɛdaadaa no, ma enti obu n’ani gu nneɛma so na ontumi mfa nneɛma ho adwene. Ma yɛmfa nsã nyɛ nhwɛso. Ebinom de wɔn ho ato nsã so, na ahyɛase no, wɔte nka sɛ ɛma wonya akokoduru de gyina wɔn haw ano. Nanso ebewie ase no, na wɔn a wɔde wɔn werɛ ahyɛ nsã mu no adi wɔn ho awu. Nyamesom mu gyidi nso tumi yɛ nnipa saa anaa?
Ebinom wɔ adwene sɛ, sɛ wɔka sɛ obi wɔ gyidi a, ɛkyerɛ sɛ biribiara na wafa no saa ara. Wɔkyerɛ sɛ nnipa a wɔka sɛ wɔwɔ gyidi no, wɔmpɛ sɛ wɔde wɔn adwene bɛyɛ adwuma anaa sɛ woso biribi mu na adanse kyerɛ sɛ ɛnte saa mpo a, wɔmpɛ sɛ wogyaa mu. Sɛ nkurɔfo keka saa a, na wɔrepɛ akyerɛ sɛ gyidi sisiw nnipa aso.
Bible ka gyidi ho asɛm pii. Nanso ɛnka wɔ baabiara sɛ yennye biribiara ntom saa ara anaa yɛnyɛ tibɔnkɔso. Mmom Bible ka sɛ nnipa a wogye asɛm biara a wɔte di no yɛ agyimfo. (Mmebusɛm 14:15, 18) Nea ɛwom ara ne sɛ, sɛ yɛte asɛm bi na yɛanhwehwɛ mu ansa na yɛagye adi a, ɛbɛyɛ agyimisɛm. Sɛ yɛyɛ saa a ɛbɛyɛ te sɛ nea obi aka akyerɛ yɛn sɛ yɛnkata yɛn ani ntwa kar kwan kɛse bi mu; ɔkae ara na yɛn nso yedi so.
Bible nka sɛ yɛnte ase mpo a yennye nni, na mmom ɛhyɛ yɛn nkuran sɛ yɛmma yɛn ani nna hɔ na obiara annaadaa yɛn. (Mateo 16:6) Nea ɛbɛkyerɛ sɛ yɛn ani da hɔ ne sɛ yɛde yɛn “adwene” bɛyɛ adwuma. (Romafo 12:1) Bible kyerɛ yɛn sɛ ansa na yebesi biribi ho gyinae no, adanse a ɛwɔ hɔ nyinaa, ɛsɛ sɛ yesusuw ho na ama gyinae no adi mũ. Ma yɛmfa ɔsomafo Paulo nkrataa a ɔkyerɛwee no bi nyɛ nhwɛso.
Krataa a Paulo kyerɛw kɔmaa Roma asafo no, wanka ankyerɛ wɔn sɛ wonnye Onyankopɔn nni kɛkɛ. Mmom, ɔhyɛɛ wɔn nkuran sɛ wɔnhwɛ adanse a ɛwɔ hɔ a ɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn wɔ hɔ ampa. Paulo kyerɛwee sɛ: “[Onyankopɔn] su horow a wonhu no ada adi pefee fi wiase bɔ so, efisɛ wɔnam nneɛma a wayɛ so na ehu, ɛno ne ne daa tumi ne ne Nyamesu, enti [wɔn a wonnye Onyankopɔn tumi ntom no,] wonni anoyi biara.” (Romafo 1:20) Paulo rekyerɛw krataa akɔma Hebrifo no, ɔfaa ɔkwan a ɛte saa ara so ne wɔn susuw nsɛm ho. Ɔkae sɛ: “Nokwarem no, ofie biara obi na osi, na nea ɔyɛɛ nneɛma nyinaa ne Onyankopɔn.” (Hebrifo 3:4) Bere a Paulo kyerɛw krataa kɔmaa Kristofo a na wɔwɔ Tesalonika no, ɔhyɛɛ wɔn nkuran wom sɛ wɔnhwɛ yiye na wɔannye biribiara anni kɛkɛ. Ná ɔpɛ sɛ ‘wɔsɔ ade nyinaa hwɛ.’—1 Tesalonikafo 5:21.
Gyidi betumi ayɛ kyɛm kɛse a ɛbɔ yɛn ho ban
Ɛyɛ ampa, nyamesom mu gyidi a ennyina adanse a edi mũ so no betumi ayɛ sɛ sumii a obi de ne ti to so, nanso ebetumi adaadaa no na adi no awu. Paulo kaa nyamesomfo bi a na wɔwɔ ne bere so ho asɛm wɔ ne krataa mu sɛ: “Midi wɔn adanse sɛ wɔwɔ Onyankopɔn ho nnamyɛ de, nanso ɛnyɛ nokware nimdeɛ mu.” (Romafo 10:2) Ɛho hia paa sɛ yetie Paulo afotu a ɔde kɔmaa Roma asafo no! Ɔkyerɛwee sɛ: “Munnya adwensakra mfa nyɛ mo ho foforo, na moasɔ ahwɛ ahu Onyankopɔn pɛ a eye na ɛsɔ ani na edi mũ.” (Romafo 12:2) Sɛ yɛn gyidi gyina Onyankopɔn ho nokware nimdeɛ so a, ɛrenyɛ sumii a obi de ne ti to so, na mmom ɛbɛyɛ “kyɛm kɛse” a ɛbɔ yɛn ho ban fi adwennwene ho, na ɛremma yɛne Onyankopɔn ntam nsɛe.—Efesofo 6:16.